इन्टरनेट काम गर्दैन, र "स्काइप" काम गर्दछ: के गर्ने?
धेरै प्रयोगकर्ताहरू आफ्नो जसमा परिस्थिति संग सामना गर्दै छन् इन्टरनेट काम गरिरहेको छैन, र "स्काइप" काम गर्दछ। र यो मामला मा, आफ्नो आतंक: के तपाईं गर्छन्? धेरै यहाँ समस्या समाधान। यो सबै के अपरेटिङ सिस्टम मा कारण समस्या भएको थियो निर्भर गर्दछ। र अब हामी एक सानो थप विवरण यसको बारेमा थाहा छ। समाधान आफ्नो कम्प्युटर समस्या गर्न तपाईं लगातार आफ्नो अवस्था अनुगमन गर्न हुनेछ भनेर नबिर्सनुहोस्। एउटा कारण वा अर्को को प्रयोगकर्ताहरूको सबैभन्दा गर्न छैन। फलस्वरूप, केही "स्काइप" काम र इन्टरनेट - छैन। यस मामला मा के गर्न?
हामी आजको घटनाहरूको कारण सबै प्रकारका बाहिर आंकडा प्रयास गर्नुहोस्। पूर्ण र सही ढंगले प्रश्नको जवाफ मात्र तरिका हो। र पहिलो, किन ब्राउजर इन्टरनेट, "स्काइप" काम गर्न जाने छैन, तर एक नेटवर्क जडान आवश्यक अन्य आवेदन रन छैन - यो भन्दा साधारण systemic विफलता रूपमा, अन्य छैन।
अर्को शब्दमा, तपाईं बस "स्काइप को" मानिन्छ काम गर्ने ट्रेमा चिन्ह बाल्न, तर वास्तविकता यो "अफलाइन" मा छ। किन यति? सानातिना सिस्टम असफल कुनै एक प्रतिरक्षा छ। र यो घटना विभिन्न कारण उत्पन्न गर्न सक्छ - सञ्चालन प्रणाली सेटिङहरू मा त्रुटिहरू कुनै पनि आवेदन को अनुचित स्थापना देखि। यस मामला तपाईंको कम्प्युटर पुन: सुरु गर्न सजिलो छ मा यो सामान्यतया मद्दत गर्छ।
यो एकदम बारम्बार छ - तर अवस्थामा जो कुनै वेब ब्राउजर, हुनत "स्काइप" काम (र साथै अन्य आवेदन) छ। यो हुन सक्छ किन अर्को कारण - फाइल ब्राउजर क्षति छ। अर्को शब्दमा, इन्टरनेटमा पहुँचको लागि तपाईंको आवेदन क्षतिग्रस्त बस "भाँचिएको" वा छन्।
कसरी जाँदै छ? यहाँ पनि, विकल्प शायद धेरै। banal भाइरस बाट आवेदनमा गलत सेटिङहरूमा। सिद्धान्त, तपाईंले धेरै तरिकामा यो समस्या समाधान गर्ने प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ। पहिलो - यो अवस्थित ब्राउजर पुन छ। तर इन्टरनेट अझै पनि तपाईं संग काम छैन, यदि र "स्काइप" काम, यो अर्थमा बनाउँछ र सञ्जाल पहुँच गर्न आवेदन परिवर्तन। एकदम अक्सर, यी कदमहरू तपाईँ समस्या हटाउन मदत गर्न सक्नुहुन्छ। तर, यो र यो घटना मूल को अन्य स्रोतबाट छ भनेर हुन्छ। निस्सन्देह, इन्टरनेट काम गर्दा भएन ( "स्काइप गरेको" र "ICQ", केहि खोल्न गर्दैन बाहेक), हामी राम्रो सबभन्दा छोटो सम्भव समयमा न्यूनतम हानि संग समस्या समाधान गर्न प्रयास छ।
जसको लागि इन्टरनेट काम गरिरहेको छैन अर्को कारण, र "स्काइप" काम गर्दछ - यो तपाईँको जडान बाहिर कसैले जडान जस्तै केही छ। अर्को शब्दमा, दर केही कार्यक्रम मा काम गर्न मात्र पर्याप्त छ। तर डाउनलोड पृष्ठ र साइटहरु कुनै यातायात। नियम, समस्या यस प्रकारको वायरलेस इन्टरनेट प्रयोग गर्न रुचि प्रयोगकर्ताहरूको लागि खडा। त्यसैले, हामी समय समयमा सचेत हुन छ।
खुसीको कुरा, स्थिति समाधान गर्न धेरै सजिलो छ। यसलाई तपाईंको Wi-Fi पासवर्ड सेट गर्न वा केही बढी जटिल प्रतिस्थापन गर्न पर्याप्त छ। आखिर, मात्र तरिका तपाईं आफ्नो इन्टरनेट जडान गर्न "चूसा" को हुन् ती आफूलाई रक्षा गर्न सक्छन्। पासवर्ड परिवर्तन गर्नुपर्छ र आफ्नो कम्प्युटर फेरि सुरु - र सबै समस्या जानेछ। तपाईं पूर्ण शक्ति फेरि ब्राउजर कमाउन हुनेछ, र जडान गति सामान्य स्तर फर्कन हुनेछ। तर, कहिलेकाहीं यसलाई त, पनि परिवर्तन पछि इन्टरनेट पासवर्ड काम गरिरहेको छैन भन्ने उत्तेजित गर्दछ, र "स्काइप" काम गर्दछ। यस मामला मा के गर्न? हामी ध्यान दिएर अनुप्रयोगको "व्यवहार" यस प्रकारको पैदा गर्न सक्छ के विचार गर्नुपर्छ। तर यो छिमेकी वा सडक मा राहगीरों-द्वारा को काम छैन भनेर निश्चय साथ भन्न सम्भव छ। समस्याको एक ठूलो र थप विनाशकारी वर्ण छ गर्छन। तर आतंक अझै पनि छैन यो लायक छ। सबै पछि, समसामयिक निदान स्थिति उपाय गर्न मद्दत गर्नेछ।
तैपनि, तपाईं पहिलो नेटवर्क कठिनाइ मा छैन सजग हुनुपर्छ। कहिलेकाहीं इन्टरनेट लोड छ, र "स्काइप" काम गर्दछ। र ठीक छ, तर केवल केही अवस्थामा। र यो धेरै गर्न परिचित छ - यो डाउनलोड कागजातहरू (hefty) धार trackers देखि। यदि तपाईं त एक सामान्य वेब (ब्राउजर) को सम्भावना तीव्र गतिमा शून्य नजिकै छ, धार केही डाउनलोड गर्न प्रयास गर्ने छ।
यो किन छ? केवल मोडेम द्वारा समर्थित सबै यातायात, डाउनलोड गति कागजातहरू मा वृद्धि दिइएको। र पाठ्यक्रम, काम ब्राउजर चलाउन पर्याप्त शक्ति छैन। र पनि अधिक त, यो एउटा चलचित्र वा एउटा सुन्दर वेब पेज डाउनलोड गर्न पर्याप्त छ।
यस मामला मा आवश्यक छ, वा केही समय धार संग एक डाउनलोड रोक्न, वा यो पूरा भएको छ सम्म प्रतीक्षा गर्नुहोस्। त्यसपछि इन्टरनेट ट्राफिक को दर फेरि वितरित। निस्सन्देह, ब्राउजर र वेब पेज फेरि काम। त्यहाँ अपवाद हुन्छन्, तर इन्टरनेट काम गर्दैन कारण बेला मात्र, र "स्काइप" थप घमन्डी र विनाशकारी लागि काम गरिएको छ। नेटवर्कमा काम गर्न इन्कार गर्दा अरू के प्रयोगकर्ताका लागि प्रतीक्षा गर्न सक्छन्?
केवल प्रयोगकर्ता (तर अझै पनि कहीं सबैभन्दा खतरनाक हुँदा) पूरा गर्न सक्ने अर्को खराब कुरा हो - यो कम्प्युटर रजिस्ट्री को "clogging" छ। यस मामला मा, आफ्नो अपरेटिङ सिस्टम सुस्त सुरु हुनेछ। र यो कार्य को पहिलो शुरू भएको एक जागा-अप कल रूपमा सेवा गर्नुपर्छ। यसबाहेक, नियम, इन्टरनेट सामान्य काम गर्न इन्कार। यसलाई "स्काइप", "ICQ" र अन्य आवेदन कार्य गर्दै देखिन्छ, र ब्राउजर पृष्ठ लोड छैन। सबै यो छिटो र सजिलै सही - सञ्चालन प्रणाली को सामान्य सफाई।
यो उद्देश्य लागि, यो CCleaner भनिने विशेष उपयोगिता प्रयोग गर्ने निर्णय गरे। यो बिल्कुल मुक्त गर्न र प्रयोग गर्न सजिलो छ। सेटिङ, सबै हार्ड डिस्क विभाजन र ब्राउजर स्क्यान गर्न त "विश्लेषण" बटन क्लिक गर्नुहोस् सेट चल्न। केही सेकेन्ड - र यो "सफाई" परिवर्तन हुनेछ। गर्न रजिस्ट्री सफा, तपाईं यो बटन क्लिक गर्न आवश्यक छ। सबै छ। अब तपाईंको कम्प्युटर फेरि सुरु र परिणाम हेर्न। नियम, यो धेरै राम्रो हुनेछ - इन्टरनेटमा फेरि काम गर्नेछ।
यदि यो हुँदैन, कारण थप खतरनाक क्षणमा झूठ हुन सक्छ। उदाहरणका लागि, संक्रमित कम्प्युटर मा। त्यसपछि तपाईं मात्र इन्टरनेट काम गर्न इन्कार, र सारा सिस्टम धेरै नराम्ररी "सुस्त" कहिलेकाहीं सुरु हुन्छ। दुर्भाग्यवश, त्यस्तो नतिजा प्रत्येक दोस्रो प्रयोगकर्ता वर्ल्ड वाइड वेब लागि सम्भव छ। र समय प्रणाली सफा गर्न कारबाही गर्दैन भने, तपाईंले आफ्नो सबै व्यक्तिगत डेटा गुमाउनु गर्न सक्नुहुन्छ।
भाइरस पत्ता लगाउन एन्टिभाइरस सफ्टवेयर मद्दत गर्नुहोस्। हामी एक गहिरो स्क्यान पूरा गर्न छ। यो धेरै घण्टा 30 मिनेट देखि लिन्छ। को स्क्यान पूरा गरेपछि सबै खराब फाइलहरू सफा हुनेछ। र तपाईं बस मेटिने छैन निको गर्न सकिन्छ। त्यसपछि तपाईँ कम्प्युटर फेरि सुरु र इन्टरनेटमा एक सानो काम गर्न प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ। यो समस्या समाधान छ कि छैन वा निर्णय गर्न मद्दत गर्नेछ। प्रायजसो, विरोधी-भाइरस एउटा अपील गर्न मद्दत गर्छ। तर यो पनि पनि धेरै स्क्यानहरू, cleanings र निदान पछि इन्टरनेट काम गर्दैन हुन्छ, र "स्काइप" काम गर्दछ।
मूलतः, तपाईं इन्टरनेट को समस्या सामना गर्न लामो समय चाहँदैनन् भने, तपाईं तुरुन्त सजिलो गर्न सबैभन्दा लामो र समस्याग्रस्त तरिका जाने, तर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हामी अपरेटिङ सिस्टम पूर्ण reinstallation बारेमा कुरा गर्दै छन्। यो निर्णय धेरै खतरनाक भाइरस (Trojans) आफ्नो कम्प्युटरमा को मामला मा recourse लगियो।
सञ्चालन प्रणाली स्थापना डिस्क को आवश्यक कार्य को आयोग, साथै केही समय (एक घण्टा देखि धेरै गर्न) को लागि। विन्डोज7को संस्करण राख्न र पछि भने, चालक नै कन्फिगर र चलिरहेको इन्टरनेट डाउनलोड पछि। समस्या हल गरिनेछ। तर यहाँ महत्त्वपूर्ण एक क्षण: तपाईं अन्यथा आफ्नो सबै प्रयासमा सफलता ल्याउन छैन, सञ्चालन प्रणाली स्थापना गर्दा हार्ड डिस्क ढाँचाबद्ध गर्न आवश्यक छ।
"स्काइप" काम र इन्टरनेट गर्दा - यो मामला मा के छैन, तपाईं हामी अगाडि सारा प्रक्रियाको बारेमा राम्ररी सोच्न छ, थाहा छैन। निम्न तपाईं टाउको दुखाइ को यस प्रकार आफूलाई सुरक्षित गर्न सक्नुहुन्छ केही सुझावहरू छन्।
सुरू गर्न वेब ब्राउजर पुन, र तपाईं एक धार डाउनलोड कागजातहरू मार्फत जाँदै छैन भनेर पक्का छ।
अर्को, कम्प्युटरको रजिस्ट्री सफा। यो धेरै "जोड्नु" छैन भने पनि यो गर। आदर्श, यो प्रक्रिया एक महिना बाहिर एक पटक लगे गर्नुपर्छ।
कि पछि, भाइरस लागि आफ्नो कम्प्युटर स्क्यान, तर पहिले आफ्नो इन्टरनेट जडान पासवर्ड परिवर्तन गर्नुपर्छ।
तपाईं आफैलाई समस्या संग कुस्ती गर्न चाहँदैनन् भने ब्राउजर इन्टरनेटमा जान गर्छ जब "स्काइप" यो सेवा केन्द्र कम्प्युटर ले सबै भन्दा राम्रो छ, यो काम गर्छ। त्यहाँ चाँडै पत्ता लगाउन र नेटवर्क जडान गर्न इन्कार जो समस्या, समाधान गर्न सिस्टम प्रशासक हुन्।
सबै भन्दा राम्रो कार्यक्रम कम्प्युटर प्रदर्शन सुधार गर्न
Bandicam कसरी प्रयोग गर्ने: विस्तृत निर्देशनहरू
एक "अन्धो" छाप के हो? -प्रकार स्पर्श कसरी सिक्न
कसरी सर्भर CSS सिर्जना गर्न, शुरुआती लागि सुझावहरू
कसरी सम्पर्क थप्न "स्काइप मा।" छोटो निर्देशन
मा कति सप्ताह प्रसूति बिदा मा जाने
कसरी व्यवहार गर्न पिन्चे आंत्र सिंड्रोम: व्यावहारिक सल्लाह
को Rostov क्षेत्रमा किर्नाले: वर्णन, प्रकार, फोटो। त्यहाँ Rostov क्षेत्रमा कुनै पनि encephalitis कण छन्?
"वोक्सवैगन Crafter" - व्यावसायिक गतिविधिहरू लागि ठूलो ट्रक
एक साहसी मानिस। साहस र आत्म-नियन्त्रण। कसरी साहसी बन्न?
यो प्रणाली एकाइ लागि साँच्चै आवश्यक अडान छ?
Chak Shuldiner: जीवनी
Gouges - शब्द को यो अर्थ ...
अल्ला Gerber: जीवनी, काम
Jutland प्रायद्वीप: विगत र वर्तमान
Topiary कला: प्रकार र फोटो
मासु हृदयको cutlets कसरी खाना पकाउनु?